Nuur Cadde oo ku baaqay wada hadalo | maakhir.com
Nuur Cadde oo ku baaqay wada hadalo
January 18, 2008 in Somalia
Baydhabo: Raisalwasaare Nuur Xasan Xuseen ayaa ku baaqay wada hadalo kuwaasi oo ay Dawlada Somaliya la galayso kooxaha ka soo horjeeda, Raisalwasaare Nuur Cade oo maanta saxaafada kula hadlay magaalada Baydhabo ee fadhiga u ah Baarlamaanka Somaliya ayaa sheegay sidaasi.
Raiisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen, ayaa shaaca ka qaaday in ay dowladdiisu diyaar u tahay in ay wadahadal la gasho dhammaanba kooxaha ka soo horjeeda, oo ay ka mid tahay kooxda All- Shabaab, iyo walina kuwa ku sugan Dibada Dalka,waxana uu sheegay inuu arinkaasi soo dhawaynayo in Dalka Somaliya khilaafka ka taagan la soo Afmeero.
Nuur Cade waxa uu sheegay in Qofkasta oo muwaadin Somaliya ah uu xaq ku leeyahay Dawlada Somaliya, waa hadii uu yahay muxaafid iyo Mucaaradba, Nuur Cade ayaa sidoo kale sheegay inay dhawaan la soo siidaynayo Xeer ilaaliyaha Maxkamada Sare ee Somaliya Ninka lagu magcaabo Yuusuf Cilmi Haruun.
Mr Nuur Cade ayaa sheegay inay Dawladani ku dhisan tahay wada hadal iyo is afgarasho ayana waxa koowaad oo ay ka shaqaynayaan ay tahay Soo celinta Nabada iyo waliba wada hadalo ay la galayaan Kooxa mucaaradka ah ee ka soo horjeeda Dawlada Somaliya.
Raisalwasaare Nuur Cade ayaa sheegay iyana inuu dhawaan tegayo magaalada Caasimada ah ee Muqdisho halkaasi oo intii la soo doortay aanu tegin, waxana uu sheegay inuu wada hadalo dheeraad ah la galayo wax garadka Deegaanka iyo waliba qaybaha kala duwan ee Bulshada rayidka ah.
Raisalwasaaruhu waxa uu soo qaatay Dagaalada ka oogan gudaha magaalada Muqdisho isaga oo sheegay inay jiraan dad waligood diidanaa inay Dalka Somaliya Nabadi ka dhalayo,waxana uu ugu baaqay dadkaasi inay ka waan toobaan waxaasi oo ay soo eegaan dhanka wada hadalada.
Gebagebadii Nuur Cadde waxa uu ugu baaqay dhamaan shacabka Somaliyeed meel kastoo ay Joogaan inay ka shaqeeyaan Nabada iyo xal ku soo waarida Dalka Somaliya si dalka Looga saaro dagaalada soo jireenka ah.
Hadala Raisalwasaaraha ayaa ku soo beegmaya xili ay Amaanka caasimada Somaliya ee Muqdisho uu yahay mid aan laysku halayn karin oo ay dhacayaan Dagaalo xidhiidh ah.
« Somaliland oo albaabkasta u gaarcaday inay Hesho Aqoonsi
France iyo Emaradka Carbta oo kala saxeexday Nuclear »